Usoro na Ọnọdụ - Alietc.com
Biko gụgharịa usoro iwu anyị. N'IME AKW REKWỌ AKW ANDKWỌ NA-EKWU NA EGO NA-EZIAKA ndị ahịa ọrụ ANY TO GA-EKWETA.
Nabata na ALIETC! Onye ndu zuru ụwa ọnụ na ịntanetị na azụmaahịa. Ọnọdụ ndị a na-akọwa usoro iwu dị ka ịnweta gị na ojiji nke weebụsaịtị, saịtị mkpanaka na ọnụ ụzọ ndị ọzọ na webspace nke alIETC.com na-arụ ma nwe ya.
Ngwa na nnabata nke usoro
Site na ịdebanye aha na ikwenye na Usoro Ojiji anyị, ị dabere na usoro na ọnọdụ dị na akọwapụtara na akwụkwọ a yana Iwu Nzuzo. Ọrụ anyị (gụnyere ọrụ nkwalite na mmezi ọ bụla ma ọ bụ nrụgide ọ bụla) gụnyekwara Ndepụta Top ma ọ bụ Ndepụta nkwado yana ọrụ ndị ọzọ dị ka ALIETC.com nwere ike ikwuputa n'oge. A na-ezukọ akwụkwọ a na iwu na ụkpụrụ ndị ọzọ na 'Usoro'. Site na ịdebanye aha na iji atụmatụ na ngwaahịa saịtị ahụ, ị ​​kwenyere ịnabata ma rụọ ọrụ dị ka Usoro niile si dị.
Mmachibido afọ: Nnweta na ojiji nke ọrụ ALIETC.com, atụmatụ na ngwanrọ na ngwaahịa site na saịtị anyị ka amachibidoro ndị ọgbọ iwu na karịa. A ga-ekwuwapụta na afọ iwu gị ka ọ bụrụ nkwekọrịta na-ejikọ ọrụ anyị yana ndị na-edebanye aha na ọrụ anyị n'okpuru afọ iwu akwadoghị ịnweta ọrụ ọ bụla n'okpuru iwu mba ofesi, gụnyere mpaghara ma ọ bụ obodo ebe ibi na ya, ma ọ bụ na-arụ ọrụ. site na. Ndị ọ bụla achọtara ebubo ụgha gbasara afọ ole iwu ha siri dị ga-eme ka ewepu saịtị ahụ ozugbo na mmachi na akaụntụ ha ozugbo.
Azụmaahịa dị n'etiti ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ere: com na-enye ọnụọgụ ntanetị n'ịntanetị maka ịgbanweta, ịzụta na ire ozi na azụmahịa. Ndị ọrụ na-enwe ike ijikwa, ịnakwere, debe ma mechie iwu na ndokwa nke ngwaahịa. ALIETC.com anaghị achịkwa ma ọ bụ na-ekwu na ọ bụ ya nwere ike ịta onye na-ere ya ma ọ bụ ike ịre ya mezue ịzụta ya. ALIETC.com abughi maka nchekwa, iwu, ma ọ bụ nnweta nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ agbanwere n'elu ikpo okwu ya.
Ndezigharị:com nwere ike ime mgbanwe na mmezi na Usoro ha na Nzuzo nzuzo ha n'oge ọ bụla site na biputere mgbanwe dị mkpa na mmelite na Usoro Ọrụ ha na ozi saịtị. Site n'ịnọgide ịnweta ọrụ ahụ mgbe oge ahụ gasị, ị kwenyere n'ihe ndezigharị na nke emelitere. Ozi niile emegharịrị na nke emelitere ga - emetụta gị ozugbo edepụtara na Usoro na Ọnọdụ yana Ozi Ntaneti.
Ndị Otu ga-emerịrị:
Mee omume na nnabata na usoro saịtị yana iwu dị adị
Jiri ezigbo okwukwe na-azụ ahịa azụmaahịa
Ejila saịtị ahụ wayo ọ bụla
Abanyela na Spamming ma obu Phishing
Agaghị etinye onwe ha na mmemme ma ọ bụ atụmatụ nke na-emebi ikwado ntụkwasị obi nke data, sistemụ ma ọ bụ netwọdu nke ALIETC.com na-eji
Agaghị etinye nje kọmputa ma ọ bụ sọftụwia ọzọ na-emebi ihe
Abanyela aka n'uzo na ezighi ezi, dika i copomi, imeghari ma obu imebi uzo obula nke ndi oru ALIETC.com
Nye ihe omuma banyere njiri mara.